Ity farany moa izay mipetraka any Etazonia ankehitriny dia anisan’ireo mpiara-miasa tena akaiky an’i Marc Ravalomanana nanomboka tany amin’ny Tiko ka hatramin’izy nitantana ny firenena. Filohan’ny antenimierandoholona i Yvan Andrianasandratriniony tamin’ny 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana, efa minisitry ny fanajariana ny tany. Efa nandalo tao amin’ny minisiteran’ny fambolena ihany koa izy ary efa nitana ny toeran’ny filoha nasionalin’ny antoko Tiako i Madagasikara. Mialoha izay dia izy no nitantana ireo haino aman-jery natsangan’i Marc Ravalomanana dia ny Radio Mada sy ny MBS. Tsy nisy nipika ny resaka nifanaovan’ny roa tonta. Ny azo antoka dia mbola mifandray amin’ireo mpiara-miasa taminy fony izy ben’ny tanàna sy ny filoham-pirenena i Marc Ravalomanana na eto an-toerana na any ivelany ireo olona ireo. Ny tsiliantsofina re raha tonga ny fotoana hiverenan’i Dada indray eo amin’ny fitantanana ny firenena dia mbola vonona ny hiara-kiasa aminy ireto mpiara-miasa aminy fahiny ireto. Tsy resaka olona fa tena firenena sy fandaharan’asam-pampandrosoana ny an’i Marc Ravalomanana sy ny antoko Tiako i Madagasikara. Na ny mpanara-dia azy na ireo fatra-panakiana dia samy mahatsapa fa mitombina ary ilain’ny firenena ny vina nananan’i Dada 15 taona lasa izay dia ny hoe : « amboary ny lalana manerana an’i Madagasikara ». Tsy olon’ny resaka ambony latabatra fotsiny i Marc Ravalomanana fa tia mifangaro amin’ny vahoaka sy ny mitety ireo faritra maro samihafa eto amin’ny nosy mba hahafantarany ny zava-misy marina. Hainy ny miresaka sy mifanerasera aman’olona ary hitam-poko hitam-pirenena fa tena mbola mahaliana ny olona hatrany izy sy ny zavatra ambarany. Tonga nijery ny zava-misy teny Analakely niaraka tamin’ny vahoakan’Antananarivo omaly Atoa Ravalomanana ary nandray anjara tamin’ireo karazana lalao sy fialamboly nisy teny sady nitafa mivantana tamin’ireo olona sendra azy koa.